Xposed Marshmallow တွင်ယခုရရှိနိုင် | Androidsis
Manuel Ramirez | | Android Root ပါ, NOTICIAS, Android ဗားရှင်း
Android ၏ဗားရှင်းအသစ်ပေါ်လာတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်သေချာပေါက်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရမည် န်ဆောင်မှုများ updated ခံရဖို့ရှိသည် သူတို့ကိုမှန်ကန်စွာသုံးစွဲနိုင်ရန်။ ထုံးစံ ROM များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသည်မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် (သို့) လများအထိကျွန်ုပ်တို့သည် CyanogenMod 13 သို့မဟုတ်ထို Android ဗားရှင်း၏နောက်ဆုံးအားသာချက်များကိုရရှိရန်သည်းခံမှုအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ROOT အထူးအခွင့်အရေးများရသောအခါအသုံးပြုလေ့ရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်အချို့သောအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းထပ်တူမှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Xposed modules များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ကောင်းမွန်စွာ configure လုပ်ရမည်ကိုသိလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသောသူတို့အား
ယခုကျွန်ုပ်တို့အား Android အဆင့်ကိုအခြားအဆင့်သို့ယူဆောင်သွားရန်ခွင့်ပြုထားသည့် Xposed framework သည်အသစ်ပြုပြင်လိုက်ပြီဖြစ်သည် Android Marshmallow နှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Xposed ဗားရှင်းအသစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် TWRP ကဲ့သို့သောစိတ်ကြိုက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်ဖိုင်တွဲတစ်ခုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးတွင် Xposed installer ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤ modules များသို့ထွက်ခွာသွားသူများသည် Android မှအကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်အတွက် ROOT သည်ယခင်ဖုန်းများအသုံးပြုသူများဖုန်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုသောအခါလိုအပ်သကဲ့သို့မလိုအပ်တော့သည့်အတွက်အလွန်ကောင်းသောသတင်း။
1 ဂရုတစိုက် ...
မူဘောင်ကိုလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအသစ်ပြောင်းခဲ့ပြီးကတည်းကအချို့သော Xposed modules များကိုသူတို့ developer များကသူတို့ကောင်းကောင်းမလည်ပတ်မီ update လုပ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ ဤ modules အများစုကို၎င်းတို့၏ developer များက XDA ဖိုရမ်များမှရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် သင်သူတို့ကိုဖြတ်သန်းသွားရန်အကြံပြုသည် နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအသစ်ရှိ၊ မရှိ Android 6.0 Marshmallow ဖြင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Android 5.1 မှ 6.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်နေသည် 5.0 မှ 5.1 ထက်သာ။ ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည် နှင့်အများအားဖြင့်အရာအားလုံးပြanyနာမရှိဘဲ ported ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Xposed ကိုသုံးသူများသိကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကျယ်ပြန့်သောအက်ပလီကေးရှင်းစာကြည့်တိုက်မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် (သို့) Play စတိုးမှတစ် ဦး ချင်းလေ့လာခြင်းအားခွင့်ပြုသည်။ ယခုအချိန်တွင် Xposed version 6.0, ဗားရှင်း 77 သည် SuperSU root урукс manager နှင့်သာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ အချို့သော module များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များသည် SELinux ဗားရှင်းအသစ်များနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။
အချို့သော Samsung နှင့် Sony ဖုန်းများသည်စတော့ရှယ်ယာဗားရှင်းတွင်ရှိသည် သူတို့သည် bootloops များကိုရှာဖွေနေကြသည်။ GravityBox ကဲ့သို့သောသီးခြား module တစ်ခုအား၎င်းတို့ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်မွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်။
များသောအားဖြင့်ကြောင်းတစ်ခု Xposed မူဘောင်၏ထိုကဲ့သို့သောမကြာသေးမီကဗားရှင်း၌တည်၏ ဆော့ဖ်ဝဲ၏ ins နှင့်တနေရာသို့ delve Xposed file ကိုအသုံးမပြုခင် system ကို backup တစ်ခုလုပ်ရန်အကြံပေးသည်။ လုံခြုံရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးအရာရာကိုမဆုံးရှုံးစေရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အပြောင်းအလဲများကိုထည့်သွင်းရန်နှင့် Stagefright ကိုပြုပြင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသောအသစ်ပြင်ဆင်ထားသော patch အသစ်များနှင့်အတူ Rovo သည် Android 5.0 / 5.1 အတွက် Xposed ဗားရှင်းကိုထုတ်လုပ်မည်။
Xposed developer ကသူသည်မကြာမီလာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း Lollipop (5.0 / 5.1) အတွက်ဗားရှင်းအသစ်ကိုမကြာမီဖြန့်ချိမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ လုပ်အပြောင်းအလဲတချို့ Marshmallow အဘို့နှင့်ကဗားရှင်းကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟု။
ငါတို့သည်ဤနီးပါးပြောနိုင်ဤ Xposed module တွေကျေးဇူးတင်ကျနော်တို့အခုထိအသုံးပြုသူများသည်မြင်နေနေကြသည် သူတို့ရဲ့ဖုန်းကို ROOT ပိုနှစ်သက်သည် အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Android user interface ကိုနားလည်ရန်နည်းလမ်းများကိုလုံးဝချိုးဖဲ့သောဤမူဘောင်၏သီလအချို့ကိုရယူနိုင်ရန်။
Custom ROMs ကိုအသုံးပြုသူများများများများမရှိတော့သောအချက်မှာအများစုသည်အချက်အလက်များကြောင့်ဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ် ပုံမှန်အားဖြင့်ပါ ၀ င်သောဆော့ဝဲလ်နှင့်လွန်ခဲ့သော ၄-၅ နှစ်ကမဖြစ်ခဲ့သည့်အရာ၊ ၎င်းသည်မြင့်မားသောဘက်ထရီစားသုံးမှုမှပြproblemsနာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်စိတ်ကြိုက်အလွှာ၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည် CyanogenMod ၏ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များကဲ့သို့သောအချို့သော ROM များကိုဆန့်ကျင်။
သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် XDA ဖိုရမ်အတွက် entry ကို developer အားလုံးအပြောင်းအလဲများကိုဖျောပွဘယ်မှာ ဒီကနေ.
သင်သိလိုလျှင် တစ် ဦး Xposed module တစ်ခု install လုပ်ဖို့ဘယ်လို ရက်ချိန်းကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့ ဒီ entry မှ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android Root ပါ » Xposed Android Marshmallow 6.0 အတွက်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ